Ogaden News Agency (ONA) – Ogaden Refugee Community Committee oo shir-hawleed ku qabsaday Xerada Dhagaxley
Ogaden Refugee Community Committee oo shir-hawleed ku qabsaday Xerada Dhagaxley
Waxaa taariikhdu marakay ku beegnayd 20/10/13 kulan muhiim ah isugu yimid xerada Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab Gudiga Qoxootiga S.Ogadenia ee ka howlgala xerada Dhagaxlay. Gudigan oo ah xubno cusub oo dhawaan lamagacaabay ayaa kulankoodii ugu horeeyay ku qabsaday xafiiskooda xerada Dhagaxlay.
Waxaana goobta warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanaysay kasoo jeediyay gudoomiyaha Ogaden Refugee Community Commutee ( ORCC ) ee xerada Dhagaxlay mudane Cabdi Maxamad Gaaciye ( c/madoobe ), oo xubin ka ahaa gudigii hore ee howsha soo waday sanadihii ugu danbeeyay isagoo ka warbixiyay wax qabadkii gudiga wuxuuna sidoo kale ka shanqadhiyay wax yaabihii u qabsoomay iyo wixii u qabsoomiwaayay mudadii ay masuuliyaddan u hayeen umada Ogadenia ee qoxootiga ah. Gudoomiyaha ayaa gudigiisan cusub uga warbixiyay howlaha u yaala ee ladoonayo in ay uqabtaan qoxootiga Somalida Ogadenia ee ku jirta xerada Dhagaxlay.
Gudiga ayaa soo bandhigay dhibaatooyin dhowr ah oo qoxootiga haysta oo ay kamid yihiin dad cusub oo hada qoxootiga soogalay oo ladoonayo in loo sameeyo kaararka raashinka lagu qaato iyo dad sababa kala duwan ay kaararku uga xidhanyihiin oo la doonayo in loofuro. Waxay kaloo isla soo qaadeen dad soo naafoobay oo ku curyaamay dhibaatooyin ay ciidamada Itoobiya u gaysteen oo ku sugan xeryaha qoxootiga ee Dhadhaab kuwaas oo ladoonayo in hay’adaha la gaadhsiiyo dhibaatadooda.
Gudiga ayaa isla qaadaa dhigay arimahaa aan kor kusoo xusnay iyo kuwa kale oo ay falanqayn dheer kadib ku howl qaybsadeen siday howlahaa u qaban lahayeen.
Gudigan oo lagu magacaabo Ogaden Refugee Community Committee ayaa ka howl gala dhamaan xeryaha qoxootiga ee Dhadhaab waxayna xera kasta ka koobantahay Chairman, Chailady, Secretary iyo 2 xubnood waxayna leeyihiin Guddomiye iyo Gudoomiye guud oo xeryaha oo dhan ah. Waxay qabtaan howlo muhiim ah oo caawinaya qoxootiga ree ogadenia ee xeryaha Dhadhaab ku dhaqan.
Gabagabadii shirkan ay isugu yimaadeen gudiga qoxootiga ogaadeeniya ORCC ayaa kusoo dhamaaday guul iyo isfahan dhinaca shaqada ah.